Faah Faahin:- Saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab iyo Daacish oo gacanta lagu dhigay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah Faahin:- Saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab iyo Daacish oo gacanta lagu dhigay (SAWIRO)
Waxaa maalintii shalay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari lagu soo bandhigay saddex nin oo qirtay inay ka mid ahaayeen Xarakada Al-shabaab iyo Kooxda Daacish, balse go’aansadeen inay isaga baxaan kooxahaas.
Saddexdaas nin oo lagu kala magacaabayay Axmed Aadan C/laahi Aw-Cabdi (Shaafici), Muuse Aadan Maxamed (Gaal-dille) iyo C/laahi Ibraahim ayaa la sheegay ka dagaalami jireen buuraha Galgala ee bariga Puntland iyo Calmadow ee gobolka Sanaag.
Axmed Aadan Cabdulaahi Aw-Cabdi oo kooxdu u taqaanay (Shaafici) ayaa sheegey inuu muddo afar sano ah uu ka tirsanaa xoogaga Al-shabaab ee ku dhuumaaleysata buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag, kadibna ku biiray kooxda Daacish balse ay ku qabteen ciidamada amniga.
Muuse Aadan Maxamed (Gaal-dile) ayaa isna sheegey inuu ka mid ahaa saraakiisha Kooxda Al-shabaab ee Koonfurta Soomaaliya, laguna qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso.
Cabdulaahi Ibraahim ayaa qirtay in muddo laga joogo 15 cisho ka hor uu kasoo baxsaday kooxda Al-shabaab ee saldhigyada qarsoon ku leh buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag .
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo saxaafadda kula hadlay goobta saddexdaan in lagu soo bandhigay ayaa sheegay in sharciga la marsiin doono, cid kasta oo ka mida kooxaha dowladda kasoo horjeeda, laakiin ma shaacin waxa laga yeeli doono saddexdan nin ee la qabtay.